Madaxweynaha Dalka Suuriya Bishar Al-asad waxa auu sheegay in Faragelinta Ruushka uu Wax Weyn Ka Badashay Dhanka Siyasada’ – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaMadaxweynaha Dalka Suuriya Bishar Al-asad waxa auu sheegay in Faragelinta Ruushka uu Wax Weyn Ka Badashay Dhanka Siyasada’
Wareysi uu siiyay TV laga leeyahay Wadanka Czech’ Mr Asad waxa uu ku sheegay in wixii ka dambeeyay markii Ruushka uu bilaabay duqeymaha in kooxda Daacish iyo kuwa kale ee jihaad doonka ah ay bilaabeen inay isku dhexdaataan.
Waxa uu tilmaamay inuu rajeynaayo in taageerada xukuumadda Moscow ay sii jireyso.
Madaxweynaha dalka Suuriya waxa uu xaqiijiyay in dadaalka militari ee Ruushka uu yahay mid xaaladda wax kabadalaya, wax ku oolna ah oo uusan la mid ahayn kan uu Mareykanka hogaaminaayo.
Dhanka kale mid ka mid ah codeyntii ugu muhiimsaneyd abid ee baarlamaanka dalka Britain uu yeesho ayaa Ra’iisul wasaare David Cameron waxa uu xildhibaanada xisbigiisa Conservative-ka waxa uu ka codsanaayaa inay taageeraan qorshaha ah in weerarka cirka eek a dhanka ah Daacish ay ka qeybgalaan.
Laakiin waxaa hareeyay muran ah inaysan la safan hogaamiyaha xisbiga Labour ka, Jeremy Corbyn iyo wax uu mr Cameron ku sheegay Kooxda taabacsan argagixisada.
DAAWO SAWIRADA:Madaxweynayasha Galmudug iyo Puntland oo Heshiis ku kala Saxiixday Galkacyo,